नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : मान्छे कसरी बिग्रन्छ , अर्थात कम्युनिस्ट हुन्छ ?
हातमा गोबर लिएर एउटा किशोर कम्युनिस्ट आन्दोलनमा होमिन्छ । सुरुमा उसले गोबरले पर्चा टाँस्छ । अनि घरकाम ,खेतकाम, स्कुल सबै त्यागेर गोबर हातमा लिन्छ र क्रान्ति गर्न निस्किन्छ । पछि, गोबर संक्रमित भएर दिमागसम्मै पुग्छ । अनि सबैलाई शत्रु देख्न थाल्छ । भात खान पुग्ने छिमेकीलाई सामन्ती देख्न थाल्छ । भट्भटे चड्ने चोकको दोकानेलाई दलाल देख्न थाल्छ । आमालाई तीन हजार बर्षदेखी उत्पिडनमा परेकी नारी देख्न थाल्छ, बाउलाई जखमले उत्पिडक देख्न थाल्छ ।
हैट ! मान्छेका दुख र रहरहरु पनि अपार छन् ।